Khasaare Nafeed ka dhashay Roobab ka da’ay gobolka Shabelaha Hose – SBC
Khasaare Nafeed ka dhashay Roobab ka da’ay gobolka Shabelaha Hose
Sida ay ku waramayaan wariye yaasha SBC ee gobolada Shabeelooyinka Waxaa maalmihii ugu dambeeyay ka da’ayay gudaha goboladaasi siiba Gobolka Shabeelaha hoose Roobab mahiigaan ah oo siweyn loogu diirsaday dad iyo duunyaba.
Dhulalka Miyi iyo Magaalaba gobolka Shabeelaha hoose way ka de’een roobabkan waxana la soo sheegayaa saameyn dhinacyo badan oo uu ku reebay deegaanadii uu ka da’ay.
Deegaanka lagu magacaabo wanlaweyn ee ka tirsan gobolka Shabeelaha hoose ayaa lagu soo waramayaa roobabkii ka da’ay in ay ka dhaliyeen khasaarooyin naf iyo maalba leh kuwas oo soo gaaray dadka deegaankaas ku dhaqan.
Inta la xaqiijin karo khasaaraha nafeed ee dhacay waxa ay ka dheceen gudaha degmada Wanla weyn waxaana geeriyooday 5 qof oo yar iyo weynba leh kuwaas oo qaarna ay ku dumeen guryihii ay ku jireen qaarna ay daadad qaadeen.
Dadka Degaankaasi ku dhaqan ayaa lagu soo waramayaa in ay ka barakaceen guryahooda iyagoo doontay goobo banaan oo ay degaan maadaama guryihii ay degenaayeen qaarna ay biyo daadad farabadan ah galeen qaarna ay roobabkii da’ayay ku bur bureen.
Maamulka gobolka Shabeelaha hoose ayaa maalin ka hor ka deyriyay dhibaatooyinka ka dhashay Roobabkan iyo fatahaadaha wabiyada gobolku sameeyeen waxaana uu ugu baaqay dowlada Federaalka Soomaaliya iyo Hay’adaha Samafalka in ay la soo gaaraan dadka gobolka Gar gaar deg deg ah.